Versace ရဲ့ Collection အသစ်နဲ့ MTV အသစ်ရိုက်ကူးနေသော Jennifer Lopez – FemaleWear.net
Versace ရဲ့ Collection အသစ်နဲ့ MTV အသစ်ရိုက်ကူးနေသော Jennifer Lopez
အသက် ၅၀ နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Jennifer Lopez တစ်ယောက်ကတော့ အခုချိန်ထိ သူမရဲ့အလှအပနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရိုးသွားတယ် လျော့သွားတယ်လို့ကို မရှိသေးပါဘူး။ အခုလည်း သူမရဲ့ social media ဖြစ်တဲ့ instagram မှာ ပွဲဉီးထွက် တင်လိုက်တဲ့ Versace dress နဲ့ပုံတွေ shooting short video တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ သတိထားမှုကို ပိုပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။
သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Versace dress ဟာဆိုရင် 2018 Fall Collection ထဲကဖြစ်ပြီး Verasace T-shirt, Versace Belt, Versace skirt တို့ကို တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ March ၉ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမဲ့ သီချင်းအသစ်အတွက် သူမနဲ့အတူ Yandel နဲ့ Abraham Mateo တို့ဟာ video အသစ်ရိုက်ကူးနေတာပါလို့လည်း သူမရဲ့ instagram မှာတင်ထားပါသေးတယ်။
A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 9, 2018 at 2:06pm PST
#SeAcaboElAmor #newsingle #nuevamusica out today!! From @abrahammateo @yandel and me!! ??? check it out on @spotify
A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 9, 2018 at 12:27am PST
မဖြစ်မနေ Follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီး Influencer များ